WARP CloudFlare's VPN Sevhisi yekuvandudza Nhare yeInternet Security uye Performance | Linux Vakapindwa muropa
WARP iyo CloudFlare VPN sevhisi yekuvandudza nharembozha kuita uye chengetedzo
Kwekupedzisira Kubvumbi, Cloudflare yakazivisa kubatanidzwa kweVPN app Kugadziriswa kweDNS inonzi "Warp", mune beta vhezheni, izvi zvakasimudzirwa seVPN yakagadziridzwa neCloudflare iyo inoedza kudzoreredza traffic yako kuti iwedzere kukurumidza uye inoinyorawo zvakanyanya sezvinobvira kusimudzira kuchengetedzeka uye kuvanzika.
Zvakare nekupa kuvanzika uye chengetedzo yeimwe nhare dzeVPN, Cloudflare yakagadzira Warp kuti igadziriswe zvirinani nhare mbozha. Semuyenzaniso, inoshandisa iyo WireGuard VPN protocol, iyo, maererano neCloudflare, inofanirwa kudzikisa bhatiri kushandiswa kana ichienzaniswa neyakajairika VPN app. Cloudflare zvakare inoti izvozvo Warp inofanira kudzikisira kushandiswa kwedata neku caching uye kumanikidza zvemukati zvakanyanya sezvinobvira
Kunyangwe maVPNs anowanzo shandiswa kugadzira mawebhusaiti uye masevhisi kuwanikwa kubva kune imwe nzvimbo, ichi hachisi chinhu chinopihwa neApp Cloudflare. Pane kudaro, iyo VPN inoshanda kuseri kwezviitiko kuwedzera kukurumidza uye kuvanzika.
Nehunyanzvi WARP ndeyeVPN, asi yakagadzirirwa vateereri vakasiyana zvakanyanya kupfuura iyo yechinyakare VPN. WARP haina kugadzirirwa kubvumidza mukana weiyo geo-inorambidzwa zvemukatisezvo IP kero isingavanzirwe kubva kune mawebhusaiti anoshanyirwa.
Saka Cloudflare inokurudzira kuti kana iwe uchitsvaga rudzi urwu rwekudzivirira-chengetedzo, VPN kana chinyakare sevhisi seTor ingangoita sarudzo iri nani.
Iyo kambani yakazotsanangura:
“Nhasi tiri kufara kuzivisa zvatakaronga makore anopfuura maviri apfuura: application 1.1.1.1 powered by Warp performance and security technology. Isu tinovaka Warp kubva pasi kumusoro kuti igone kushanduka mune yakaoma mamiriro eazvino mobile internet.
Izvi zvakatanga nekutora kwedu kweNeumob munaNovember 2017. Panguva iyoyo, yedu CTO, John Graham-Cumming, akatsanangura maitiro Neumob aive chikamu chedu "Super Chakavanzika Master Plan". Panguva iyoyo, akange ataura kuti:
"Pakupedzisira, software yeNeumob iri nyore nyore kushanda se» VPN «yemidziyo yemafoni inogona kuchengetedza nekumhanyisa traffic dzese dzeHTTP kubva kunhare mbozha (inosanganisira zvakajairika kubhurawuza webhu uye mafoni eAPI).
Kutendeseka, yakawanda VPN software haina basa. Uchishandisa chaiyo yakavanzika network (VPN) inhanho inodzokera munguva yekufona kwakaipa, kudzikira, uye software inorema, iyo iwe yausingade. Hazvifanirwe kunge zvakadaro.
Kunyangwe paine chirongwa chakange chakavakirwa muna Chikunguru, zvaive kusvika munaGunyana izvi Warp inowanikwa kune veruzhinji. Matthew Prince, CEO weCloudfare, akakumbira ruregerero nekunonoka:
“Nhasi, mushure mekumirira kwenguva yakareba kudarika zvaitarisirwa, tiri kuvhura WARP neWARP Plus kuruzhinji. Kana usati wanzwa, WARP ndeye mobile application yakagadzirirwa vese vashandisi uye inoshandisa yedu yepasi rese network kuchengetedza ese Internet traffic pafoni yako.
Pakupedzisira Cloudfare inoyambira kuti kuchave nezvikanganiso Iyo inotsanangura kuti iko kukanganisa kwakapararira kwazvo panguva ino ndiko kudzikira kukuru kweiyo nhare yeInternet yekubatana neWARP zvichienzaniswa nharembozha yeInternet isina Warp.
Izvi zvinowanzo kukonzerwa netraffic yakatsauswa. Semuenzaniso, Cloudflare yakawana network muTurkey kutanga kwesvondo rino yakaendeswa kuLondon kwete zvivakwa zveTurkey zvemuno.
Iyo kambani inoona kuti kana ichinge yaziva nezvematambudziko aya kufambisa, iwe unogona kazhinji kuzvigadzirisa nekukurumidza.
Zvimwe zvikanganiso zvakajairika zvaive zvikwata zvekutapa - iwo mapeji maunofanirwa kuisa ruzivo, semuenzaniso kana uchibatanidza kuhotera neWiFI.
Cloudflare yakagadzirisa zvakawanda, Asi yeuka kuti sezvo vashandisi veWARP vasati vabatana kune ese masungwa maseru, zvinongoitika zvichave zvishoma zviri pasi.
Nekudaro, iyo kambani yakapa chirevo chebug. Kubva mukati meiyo 1.1.1.1 app, unogona kudzvanya iyo diki yekukanganisa icon padyo nepamusoro pechiso kana kungo zunza foni yako neapp yakavhurika uye utaure nekukurumidza.
Dhawunirodha Warp pane Android
Dhawunirodha Warp pane iOS
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WARP iyo CloudFlare VPN sevhisi yekuvandudza nharembozha kuita uye chengetedzo